Darik ee Boot Oo waxay u qeexi (Rating 4.5 / 5)
PCDiskEraser (3/5 Rating)
KillDisk (3/5 Rating)
Waa si fiican u yaqaan sida ay muhiim u tahay qalabka kabashada xogta yihiin, gaar ahaan marka aad macluumaad xasaasi ah naftaada guriga ama dadka kale ee ka qabtaan marka ka shaqeeya goobaha xirfadeed.
Ma ammaan baa in la horumariyo qalabka sida hufan u soo kabashada xogta?
Ka fikir tan:
Waxaad u shaqeeya bangiga oo magdhow ah iyo mas'uul ka ah maaraynta servers iyo kumbiyuutarada ay ku jiraan faahfaahinta login xasaasi ah macaamiisha ay yihiin. Dhamaan macluumaadka waxaa lagu kaydiyaa drive kombiyuutarada 'adag oo waa adiga masuuliyadaada si ay u ilaaliyaan ammaankooda.
Muddo ka dib, aad go'aansato in aad u cusboonaynta mid ka mid ah kumbiyuutarada iyo aad u hesho weyn disk drive adag inay meel macluumaad dheeraad ah in aad bangiga helo sabab u tahay koritaanka guul ganacsiga. Si aad u isticmaasho weyn drive ah disk adag, in aad hubaal doonayaan inay iska tuur mid hadda la isticmaalo iyo ka hor sidaas samaynaya, waa mid aad u muhiim ah in la tirtiro dhammaan xogta xasaasiga ah in ay ka kooban tahay.
Kadib marka aad si guul leh tirtirayaa macluumaadka xasaasiga ah ka disk drive adag oo dibabaxayaal, sida ay aamin kula tahay xogta aad xitaa ka dib markii tirtirka guul? Sida aad u hubsan karaa in wax techie smart ma heli doontaa helitaanka drive dibabaxayaal adag, ordo wax xog ku ool ah qalab kabashada sida Wondershare Data Recovery ku yaal inuu ka soo kabsado macluumaadka tirtirayaa xasaasi ah, oo ay ka faa'ideysan xogta si ay uga faa'iideystaan ​​shakhsi?
Marka la eego dhinaca kor ku xusan, mararka qaarkood qalabka hufan kabashada xogta noqon karaa mid waxyeello, ilaa iyo inta aadan haysan qalab kale oo hufan si ay u masixi xogta laga kaydiyo si ammaan ah. Taasi lagu sheegay, mararka qaarkood files waa si joogto ah la saaro si aanay u soo kartaa xataa iyadoo la isticmaalayo qalab ah oo hufan kabashada xogta wax alla wixii.
Ka soo kabashada Data tirtiray ah, si sugan loo takhalusid Waxaa, iyo Overwriting
Haddii aadan rabin in macluumaadka aad xasaasi u ah in lagu soo kabsaday ka tirtirka oo dhan ka dib, waa inaad qaar ka mid ah u dhaqaaqdo smart si loo hubiyo macluumaadka aad noqonayaa istimaalaynin iyo unrecoverable qaab kasta. Bet aad ugu fiican in aad samaysay noqon lahaa:
1. Isticmaal qalab wax ku ool tirtirka xog ammaan in ay tirtirto iyo baabbi'in xogta si ammaan ah.
2. Qor iyo xogta random jeer kale duwan ee kaydinta dib-u-qoraal ah si aad u samayso xog xasaasi ah gebi ahaanba unrecoverable iyo istimaalaynin weligiis. Inta jeer ee qalabka tirtirka xogta samayno midig ka dib markii isagoo tirtira kaydinta. Dhab ahaantii, waa sababta oo ah tallaabo final in xogta aad noqonayaa unrecoverable.
Best 5 Shredders Data
Sida kor looga hadlay, tirtiro xogta ammaan ka kaydiyo waa mid aad u muhiim ah, gaar ahaan marka aad macluumaad xasaasi ah wax looga qabto.
Hoos waxaa ku qoran ugu fiican 5 xogta tirtiro qalab ma aha oo kaliya tirtirto xogta ka wadid aad u adag ama wax kasta oo dib-u-writable kaydinta kale, laakiin sidoo kale macluumaadka tirtirayaa unrecoverable:
Qaybta 1aad Darik ee Boot Oo waxaa qeexi (Rating 4.5 / 5)
Tani waa mid ka mid ah macluumaadka ugu fiican oo ugu fariida sinabba aalad caalamka oo dhan. Its file u diyaarsan in la isticmaalo .ISO si fudud loo soo bixi karaa oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso ka dib in uu yahay, file .ISO in ay warbaahinta maran indhaha (CD ama DVD) gubi, kabaha PC la warbaahinta iyo si joogto ah masixi xasaasi ah xogta ka kaydinta.
Hababka in DBAN isticmaalo sanitization Xog: Naorbi, RCMP TSSIT OPS-II, 5220-22M, Gutman, qor Zero, iyo Random Data.
HDShredder waxay leedahay laba kala duwanaansho u ogolaanaysa inaad isticmaasho qalabka labada gudaha ka Windows iyo dibadda. Waxaad isticmaali kartaa duwanaansho hore marka aad rabto in aad si joogto ah xogta cawradooda biyaha horey ka kaydinta kasta oo kale oo baabuur nidaamka (meesha Windows la geliyo) ka badan, halka duwanaansho dambe waa in la isticmaalaa si loo tirtiro drive in uu leeyahay Windows waa in. Version ayaa bixisay barnaamijkan bixiyaa qaababka xitaa ka rajo.
Hababka in HDShredder Free Edition isticmaalo sanitization Xog: Qor Zero (ilaa 7 jeer overwrite).
HDDErase u baahan warbaahinta ah Downlaods (USB / CD / DVD) si aad aad PC dibadda oo sidaasay kuu ogolaanayaa inaad si ay u tirtiri aad idil drive disk adag xataa haddii uu leeyahay nidaamka qalliinka lagu rakibay waxa ku jira. Tan iyo PC waxaa booted dibadda oo isticmaalaya barnaamijka HDDErase ah, ma files Windows waa in la isticmaalo. Tani waxay u ogolaaneysaa HDDErase si ay u tirtiri oo dhan files si joogta off kaydinta.
Hababka in HDDErase isticmaalo sanitization Xog: masixi Secure.
Qeybta 4 PCDiskEraser (3/5 Rating)
Oo weliba xog kale oo aan sinabba qalab u baahan in warbaahinta ah Downlaods in uu ordo, sidaas siinta barnaamijka marin buuxa oo aan dabranayn ku wadid aad u adag oo ay ku jiraan Risaalo nidaamka (C :). Iyada oo noocan oo kale ah oo mudnaan, PCDiskEraser si buuxda u tirtiri kartaa disk adag oo si joogto ah u tirtiri kartaa xogta aad off ka.
Hababka in PCDiskEraser isticmaalo sanitization Xog: Naorbi iyo 5220 22-M.
Qeybta 5 KillDisk (3/5 Rating)
KillDisk waa barnaamij multiplatform in ka kooban yahay laba Lahjadaha - rakibayo iyo Downlaods. Qalab lagu rakibi karo on Windows ama Linux ka hawlgala nidaamyada si ay u tirtiri xogta off ka drives disk adag dibadda ama warbaahinta kale lagu kaydiyo. Iyada oo kala duwanaansho ah khaanada Downlaods, barnaamijka waa awood aan sinabba xogta off xataa disk nidaamka halkaas oo nidaamka qalliinka hoose waxa lagu xiraa.
Hababka in KillDisk isticmaalo sanitization Xog: Qor Zero.
Xogta hufan badan oo aan sinabba qalabka waa lacag la'aan iyo qaar ka mid ah waxaa la kor ku xusan. Haddii aad rabtid inaad isticmaasho shredder xog kasta oo deegaanka soo saarka ah, mar walba barnaamijka aad dib-u-taariikhda la sharooto ugu dambeeyey iyo wararka si aad u hesho sida ugu badan uga qalabka.
> Resource > Ladnaansho > Top 5 Qalabka Secure Delete in aad ka ogaato